आजको तस्वीर : बागलुङ बजारमा भदौरे नाँच ! – ebaglung.com
आजको तस्वीर : बागलुङ बजारमा भदौरे नाँच !
२०७६ भाद्र ३, मंगलवार १२:०४	Footer Slider, Top News, अन्य समाचार, विविध
बागलुङ २०७६ भदौ ३ । अहिलेको समय वर्षे भदौरे नाँचको हो । बागलुङ सदरमुकाम लगायत गल्कोटको हरिचौर, हटिया, बडीगाडको खारबजार, बलेवाको नारायणस्थान आदि स्थानहरुमा भदौरे नाँच (वषेँ नाँच) प्रदर्शन जारी रहेको छ । भदौ ३० गते तायमचा नाँचबाट सुरु भएको भदौरे नाँचको शुभारम्भ भएको हो ।
यसवर्ष बागलुङ सदरमुकाममा युवा बौद्ध संघ ज्ञानोदय बिहार र नेवा ल्याम्ह पुच बागलुङ व्दारा भदौरे नाँच प्रदर्शन गरिएको छ । विगत वर्षहरुमा बागलुङ बजारमा भदौरे नाँच दुई ठाउँ/दुई समुहबाट प्रदर्शन गरिने प्रचलन थियो । बजारको माथिल्लो भागका युवाहरुले नारायण स्थान र तल्लो भागका युवाहरुले टक्सारबाट छुट्टा छुट्टै भदौरे नाँच प्रदर्शन गरिन्थ्यो । गत २०७५ सालको भदौर नाँच (रोपाई नाँच) दुबै समुहले संयुक्त रुपमा प्रदर्शन गरेका थिए । तर यस वर्ष भने माथी उल्लेखित दुई संस्थाहरुबाट भदौरे नाँचमन्चन गरिएको छ ।
दुबै संस्थाहरुले होबा नाँच, कटुवाल नाँच, रोपाईँ नाँच, घोँडा नाँचहरु प्रदर्शन भैसकेका छन् भने युवा बौद्ध संघव्दारा प्रदर्शन गरिने जोगी नाँच प्रदर्शन गरिन बाँकी रहेको छ । लाखे नाँच भने जारी रहेको छ । लाखे नाँच तीजको दिन विसर्जन गर्ने चलन रहेको छ ।
उता गल्कोटको हरिचौरमा वर्षेनाँचको रौनक जारी छ भने हटियाबजारमा पनि वर्षे नाँचहरु प्रदर्शन भएका छन् । हरिचौर बजारमा सोमबार जोगी नाँच मन्चन गरिएको सहकर्मी दिनेश खत्रीले जानकारी दिएका छन् । हरिचौरमा बागलुङ बजारमा प्रदर्शन गरिने सबै किसिमका नाँचहरु मन्चन गरिन्छन् ।
हरिचौर बजारमा जोगी नाँच : तस्वीर- दिनेश खत्री
अन्य तस्वीर सौजन्य:जोहन बज्राचार्य ।
चलदृश्य सौजन्य : निलेश राजभण्डारी ।
बागलुङका दुई साँस्कतिक धरोहर सम्मानित : ‘केराको पातमा बालेको बत्ती हजूरको नामैमा … ‘